Izinsimbi zokuhlunga insimbi engagqwali zihlukaniswe zaba nezinto zokuhlunga ezifincizekile, futhi izinto zokuhlunga ezinamatshe angama-sintered sizokwethula izici zezinto zokuhlunga zensimbi engagqwali. Izici zento yokuhlunga yensimbi yilezi: ingasetshenziswa ngaphansi kokushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu; i-suitab ...
Ungayenza kanjani inkampani yakho ithuthuke kancane ngokuncintisana okuyishumi okuphezulu
Ungayenza kanjani inkampani yakho ithuthuke kancane ngokuncintisana okuyishumi okuphezulu Ukuze noma iyiphi inkampani ithuthuke ngokuzinzile nangokuzinza, kufanele ihlakulele ukuncintisana kwayo okuyisisekelo. Ukuncintisana okuyinhloko kwebhizinisi okokuqala kubonakala kumakhono athile.Ukuncintisana okuyisisekelo kwe ...
Ukuqapha nokugcinwa kwemishini yokuhlunga
Ukuqapha nokugcina ukusetshenziswa kwezinto zokuhlunga: Ngaphambi kokusebenzisa isihlungi sensimbi engagqwali, kufanele ubheke ukuthi izesekeli namasongo okuvala akuqediwe nokuthi konakele yini, bese uyakufaka njengoba kudingeka. Isihlungi esisha kufanele sihlanzwe nge-detergent (sicela ungafaki ...
Into yokuhlunga insimbi engagqwali ihlukaniswe yaba yisihlungi sesikrini, into yokuhlunga esintintsi sintered nento yokuhlunga sintering Okuluhlaza okwenziwe ngesici sintered filter mesh kwenziwa ngensimbi engagqwali sintered mesh. Insimbi yokuhlunga insimbi engenasici isetshenziswa kokuhlunga okwehlukile ...
Isihlungi se-elementi yensimbi engagqwali @ ukuhlunga kwesikrini esinyene
Into yokuhlunga ekhiqizwa ngumakhi wezinto zokuhlunga insimbi engagqwali inezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza, futhi imikhiqizo eminingi isetshenziswa njengesihlungi semidiya. Isici sesihlungi esikhiqizwe ngumenzi wesici sensimbi yensimbi engagqwali senziwe ngocingo olunocingo; kwesinye isikhathi kuphakathi kwesikrini ...
Isihlungi sensimbi engagqwali
Sonke siyazi ukuthi into yokuhlunga insimbi engagqwali ayinakho kuphela ukumelana nokugqwala okuhle, kepha futhi inokubukeka okuhle nezinye izici. Ububanzi besicelo sensimbi engenasici buningi kakhulu, futhi bungabonakala kuyo yonke indawo empilweni yethu. Yiziphi izici ezingenasici ...